Updated: 2016-03-08 16:31
Hotel Forza Hakata ဟာ ဖုခုအိုးက ကို အလည် လာ တဲ့ စီးပွားရေး သမားတွေ အလည် အပတ် လာတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ သင့်လျော် တဲ့ နေရာ တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။ အတွင်း အပိုင်း အပြင် အဆင် တွေက စီးပွားရေး သမား တွေ၊ အလည...
Updated: 2016-03-08 14:30
ဒိုမီ အင်း ဟာကတ ဂိအွန်း (Dormy Inn Hakata Gion)
ဒိုမီ အင်း ဟာကတ ဂိအွန်း ဟာ သွား လာ ရေး အဆင် ပြေ လှ တဲ့ နေရာမှာ ရှိ တဲ့ အတွက် အလည် အပတ် သွား ရန် အသင့် တော် ဆုံး တည် ခို ရာ နေရာ တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။ကြ ယ် ၃ပွင့် အဆင့် ရှိ တဲ့ တည်းခို ဆော...
ဖုခုအို က မျှော်စင်
ဖုခုအိုကမြို့ မိုမိုချိ ကမ်း ခြေ မှာ ရှိ ပြီး အမြင့်ပေ ၂၃၄ မီ တာ ရှိ တဲ့ ဂျပန် နိုင် ငံ မှာ အမြင့် ဆုံး ကမ်းခြေ တာ ၀ါ တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ် ။တစ် ခါ တည်း ၁၂၃ မီ တာ...
Updated: 2016-03-03 17:48
ဖုခု အို ကမြို့တော် ပြတိုက်
ဖုခုအိုက မျှော် စင် နဲ့ ရဟူး အခုံးအဆောက် အုံ တို့ က ဖုခုအိုက ရဲ့ အမှတ် အသား တွေ အနေ နဲ့ စု စည်း နေတဲ့ sea side မိုမို ချိမှာ ရှိ ပါ တယ်။ ဖုခုအိုက ရဲ့ သမိုင်း၊ အပမ်းဖြေခရီးယဉ်ကျေးမှု တို့ က တစ် ခ...
Updated: 2016-03-03 17:22
ဖုခုအိုက မြို့ အနု ပညာ ပြ တိုက်
အိုးဟိုးရိ ပန်း ခြံကို လမ်း ပတ် လျောက်ရင်း အနုပညာ လက် ရာ ကို ခံ စား ချင် ရင် ဒီ ကို ကြွ ခဲ့ ပါ ။ ဖုခု အိုက မြို့ အနု ပညာ ပြတိုက် က အရင် တုန်း က ခ၀ခုနီအို က တည် ထောင် ခဲ့ တဲ့ ကြော့...
Updated: 2016-02-11 17:06
ဖုဆွတ်ကအိချိ ရေပူစမ်းဟာ သဲန်းဂျင်း မြို့ ကနေ အောက် ကို ဆင်း ပြီး ချိခုရှိနော့ ရေပူမြို့ မှာာရှိ တဲ့ ရေပူစမ်း ဖြစ် ပါ တယ်။ဖုဆွတ်ကအိချိ ရေပူစမ်း ရဲ့ အဓိ က ဖြစ်လာ မယ့် (ဂေါ့ဇန်းယု)ဖုခုအိူကဘုရင် ခုရော့ဒ ရ...
Updated: 2016-02-11 16:41
ဖုခုအိုက ခရိုင် တောင် ဖက်နဲ့ အရှေ့ ဖက် မှာ တည် ရှိ တဲ့ ရေပူစမ်းဒေသ၊ရေပူစမ်း အရည် အသွေး က ဆာလဖာ ဓါတ် တွေ ကြွယ်ဝ တဲ့ ရေငွေ့ တွေ က ဂုဏ် ယူစရာ၊ရေကြည်ဖြစ် ပြီး တော့ အသား အရေ ကို ကြည် လင် ၀င်း ပစေပြီး လှပနု...